HomeArimaha QoyskaRagga Mise Dumarka? Ayaa Horay Uga Soo Kabsada Dhaawacyada Jacaylka?.
Dhibaatooyinka jacaylka ayaa ah waxa ugu xun ee ku dhaca qofka waana mid aan horay loo iloobin iyada oo dhaawacda dareenka iyo qalbiga qofka wax jeclaa.
Aqbalida Ragga & Dumarka:
Waxa kala duwan sida ay Ragga iyo Dumarku u aqbalaan dhaawaca ama dhibaatada jacaylka laakiin waxa aan kala duwanayn bilowga xaalada iyada oo ay labadooduba la kulmayaan dhaawac qalbiga ah iyo waliba xanuun Nafsi ah iyada oo labadooduba ku noolaanayaan xaalad wal-wal iyo niyad jab ah waxana halkaas ka bilowda dhibaatada Ragga iyo dumarka ee dhaawaca jacaylka hadaba ayaa horay uga bogsada?.
Dumarka ayaa horay uga bogsada:
Waa Run dumarku qalbi jilicsanyihiin, waliba yihiin kuwo xasaasi ah waliba inta badan loo arko kuwo diciif u ah dareenka jacaylka laakiin dumarka ayaa ah kuwo ka awood badan dhankaas waliba si deg-deg ah uga baxa dhibaatada iyo dhaawaca jacaylka marka loo bar-bar dhigo Ragga.
Kadib marka ay Gabdhu la kulanto dhaawac jacayl waxa ay la kulmaysaa jabis dhanka qalbiga ah, dhaawacyo aan dawo lahayn iyo waliba murugo aad u badan taas oo ka keento ilmo aan joogsi lahayn oo buuxisa meesha ay jiifto laakiin oohinta ayaa ah mid ka mid ah hubkeeda ay kaga hor tagto dhibaatooyinka dhaawaca iyada oo mar kale kacda iyada oo qalbiga adkaysanaya korna u qaadaysa nafteeda kana hor tagaysa dhaawacyada jacaylka taas oo ah arin ayna lahayn Raggu sababta oo ah waxa ay wakhti dheer ku qaataan in ay ka soo kabsadaan dhibaatada dhaawaca taas oo keenta in ay dumarku uga deg-deg badanyihiin ka soo kabsashada dhaawacyada jacaylka.